डा. राम बहादुर बोहराको घरमै दन्त मन्जन (Tooth Powder ) बनाउने टिप्स
जनवरी 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments घर, डा. राम बहादुर बोहरा, दन्त मन्जन
आजकल बजारमा अनेकौं थरिका दन्त मन्जन आएका छन् । दन्त मनजन प्रयोग गर्दा दाँत चम्किलो हुनुपर्छ तर जस्ताको तस्तै देखिन्छ । मेरा फेसबुकका साथीहरु यो दन्त मन्जन बनाएर एकपटक हेर्नुहोस् मलाई जीवनमा कहिलै भुल्नु हुने छैन । दन्त मनजन बनाएर आफ्नो व्यवसाय गरेर धन पैसा समेत कमाउन सक्नुहुनेछ ।
हामीमा अनुभवको कमी छ । यदि हामीले यस्ता चिजमा ध्यान दिन सक्ने हो भने पैसा घर-घरमा छ । व्यवसाय के गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने केही जान्ने र केही सिक्ने प्रयत्न गर्नुहोस । जब तपाईं विदेशमा जान चाहनुहुन्छ त्यति बेला तपाईको सर्टिफिकेट होइन तपाइले सिकेको सिपको सर्टिफिकेट माग हुनेछ ।
सिप सिकेर यदि आफ्नै देशमा केहि गर्न सकेमा श्रम बेच्नुपर्ने थिएन । आज एकैपटक ठूलो रकमको आशामा हामी विदेशमा श्रम बेच्न लालायित भएका हुन्छौ तर आफ्नो परिवारसंगै बसेर हामी मेहनत गर्छौं भने हामीले नसोचेको सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछौं ।
लोभको भाडो ठूलो हुन्छ जति लोभमा डुब्छौं त्यति नै दु:ख भोग्दै जानेछौं । विदेशी धनको लोभलाई त्यागेर मेहनत गर्न सकेको खण्डमा एक न एक दिन हामीले अवश्य प्रगति गर्नेछौं । आज मैले दाँतलाई कसरी चम्किलो बनाउने भन्ने बारेमा दन्त मन्जन बनाउने तरिकाको बारेमा प्रकाश पार्नेछु ।
बजारबाट फिट्करी ल्याउनुहोस् र ताबामा राखेर भुट्नुहोस सेलाएपछी उतारेर पिस्नुहोस त्यसमा चकलाई पिसेर १२,१२ ग्राम जति मिलाउनुहोस । मिलाएको पाउडरमा ३ ग्राम जति कपुर पिसरे मिलाउनुहोस् र ठूलो मुख भएको भाडामा राखेर दैनिक दन्त मन्जन गर्नुहोस् मोती जस्तै दाँत टल्कन थाल्दछ ।
← नाष्टको उपकुलपतिमा डा. श्रेष्ठ नियुक्त
मिर्गौलाको दुखाई र पत्थरीको कारण र उपचार →
उनले तपाईलाई प्रेम गर्छिन् भन्ने कुरा थाहा पाउने सुत्रहरु
अक्टोबर 12, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0